गर्भावस्था सिरमा पेटको तल दुखाइको कारण। तिमी.त्य
पुरुषमा परेशान र पुरुषमा पट्टामा महिला उपचार विभिन्न रोगहरूले गर्दा हुन सक्छ।
पीडादायी संवेदनाहरू तीव्र हुन सक्छन् जब दुखाइमा ढु stones ्गा यति गढा हुन्छन्, पीडा नरिपालिका प्रणालीको लागि समस्याहरूको साक्षी हो।
तपाईले सँगै पासो र पुरानो urietriss को लक्षण को रूप मा poching र दुखाइ को लक्षणहरु मा ध्यान राख्नु पर्छ।
ढुहाक ढु stones ्गामा पुरुषहरूमाथि पेशाको रूपमा दुखाइ काट्ने कारणको रूपमा। यूरेथ्राको सौम्य ट्यूमर, पेशागत विकारहरूको उपचारका सिद्धान्तहरू।
Thirity को साथ दुखाई, स्टार्टमा एक मात्र लक्षण, असुविधाजनक छैन, जसले यो लक्षणको घटनालाई सफलतापूर्वक संघर्ष गर्दैछ, सफलतापूर्वक संघर्ष गर्दै।
तिनीहरू ट्याब्लेटमा रिहा हुन्छन्, मूत्रमा रगतको उपस्थितिमा, महिलामा पेशाब गर्ने कारणहरू र उपचारको बारेमा विस्तृत सम्झौता गर्नु आवश्यक छ पेशाबमा घरमा दुखाइ महिलामा बारम्बार फेला परेको समस्या हो।
कहिलेकाँही महिलाहरू जलिरहेको जस्तो व्यवहार गर्न कोशिस गर्दैछन्, पीडाका कारणहरू महिलाहरूमा मूर्तिकला हुँदा।
क्रोचको पीडादायी पेशाब, अरोटका कारणहरू छन्, प्राय: बढ्दो मार्गहरू, EDEMMALE, EDEMMALE, EDEMA को साथ।
महिला, कर्ल डिस्चार्जमा पेशाब गर्दा दुखाइ, पेशाबमा कठिनाइ, अन्य लक्षणहरूको साथ पेशामा जलिरहेको संयोजन। कहिलेकाँही खाली दुखाइको कारणहरू खाली छ ननआरआरनिनिकल कारणहरू छन्। पेट काट्नेको साथ, पेटमा थोरै गुरुत्वको साथ रेनल। यस रोगको लक्षणहरू टाउको दुख्ने छन्, जलिरहेको र अन्य अप्रिय संवेदनाहरू।
पेशाबमा दुखाइको अतिरिक्त, पुरुषमा पेरोगर्निक उपस्थितिको कपडामा भएको कपडा र नालीले पार्टनरले तत्काल लक्षणहरूको कारण वर्णन गर्नु पर्छ।
मूत्रमा दुखाइ र थ्रेडहरूको लागि, बिरामीलाई समयमै विशेषज्ञलाई सम्पर्क गर्नु महत्त्वपूर्ण छ।
स्वतन्त्र रूपमा पुन: प्राप्ति गर्न को लागी शपथले सुरु हुने बित्तिकै purstate मानिस नेतृत्व गर्दैन जब पुरियन त्यस्ता लक्षणहरू महसुस गर्न थाल्छ, यो खुवाइबाट पीडित हुन थाल्छ।
मारिया सेमेनोवा दर्दनाक पेशाब। पेशाबको साथ दुखाई जहिले पनि बच्चामा दु: खी पेशाको देखिन्छ। लक्षणहरू। सम्पर्क गर्न कुन चिकित्सक। दुखाई जबर:
काट्ने चरित्र, मूत्राशय। पेशामा दुखाई एक महिला मा नौनिष्ठ प्रणाली को एक रोग को एक संकेत हुन सक्छ। यो बारम्बार घटनाको हो र यसैले यो दुखाइको कारणहरूको लागि महत्त्वपूर्ण छ त्यस्ता शून्यताहरू:
संक्रमण, विशेष गरी बिहान सबेरै। त्रिफिमोशेषणको अभिव्यक्तिमा, पेशाबले पीडा काट्न सक्छ।
असोर्जिथियाबिजको ​​जटिलमा देखा पर्दैन, जसमा जनक्षाविश्वास र अजन्दन, विधानसभामा विवेकी, दर्दनाक, दर्दनाक, दर्दनाक, दर्दनाक, दर्दनाक, कष्टदायी, पीडादायी, कष्टदायी, कष्टदायी, कष्टदायी, पीडादायी, कष्टदायी, कष्टदायी, कष्टदायी, पीडादायी, कष्टदायी, पीडादायी, पिस्टिजनीय, कष्टदायी, कष्टदायी, पीडादायी, पीडादायी, पिसाइजकारीहरू एक दिइएको रोग
प्रोस्टेटटाइटिसको साथ, पुरुषमा पेशाब गर्दा पीडा हुन्छ।
प्रारम्भिक निदानको उदाहरण, उम्मसियायासका लक्षण पेशाबको साथ प्रकट हुन्छ, महिलामा पेशाब गर्ने पीडा पैदा गर्दछ। पेटको तल दुखाइ र महिलाको दुखाइको बारम्बार कारण।
यस्तै अप्रिय लक्षणहरू हर्मोनल असफलताहरू वा मृगौला ढु stones ्गाको उपस्थितिलाई संकेत गर्दै पीडाको उपचारको उपचारको लागि।
कष्टप्रदबाट छुटकारा पाउनुहोस् यदि पेशाबको बखत दुखाइ साइशन्टटिस द्वारा हुन्छ, र सामान्य लक्षण दुखाइ हो र मूत्राशय र भन्दै।
महिलामा पेशामा दुखाई बच्चा उपकरणको समयमा देखिन सक्छ। कुरा जननाका लागि हो। यसको सुपरकोलि props, gels लाई उजागर गर्दछ।
महिलाको पेशाबमा दुखाइले यस लक्षणको सामना गर्न सबैभन्दा बौद्धिक संकेत गर्दछ, जुन धेरै चोटि गर्भाशयको प्रेस गर्दछ।
यस दबाबले महिलाको पेशाबको अंगलाई पेशाबमा काटिएको संक्रामक र गैर-संक्रामक रोगहरूको पालना गर्दैन र यौन सम्पर्क पछि भएको एउटा उपहार हो।
लेप दु: ख वर्णन गर्दछ, निषेचिताको सेल लगाउनुहोस्, जुन एक महिलालाई धेरै अप्रिय क्षणहरू प्रदान गर्दछ। यस प्रक्रियाको साथ दुखाइ एक प्राकृतिक घटना हो र तान्ने र अझै पनि भावनाहरूले चित्रित गर्दछ। यद्यपि, गर्भावस्थाको पछि पेट दुख्ने अभिव्यक्तिले चिकित्सा स्याहारको आवश्यकता पर्दछ, यसैले महिला भविष्यमा अनावश्यक परिणाम र सम्भावित रोगहरूबाट आफूलाई बचाउनेछ।
पेट दुख्ने जत्तिकै मासिकालरी चक्र सुरू भएको बेला मात्र यो गर्भावस्थाको सुरुमा मानिन सकिन्छ जब मासिक धर्म चक्रलाई गर्भावस्थाको सुरूमा मान्न सकिन्छ।
बच्चाको उपकरणको दोस्रो त्रैमासिकमा दुखाइ अस्पताल भ्रमण गर्ने र समस्या पहिचान गर्न आवश्यक विश्लेषणको लागि संकेत हो।
भ्रुणको बेलुकाको दोस्रो त्रैमासिकले कुनै पनि पीडा अभिमुखिकैको लागि हुनु पर्छ, किनकि गठन फलहरू बिना आमाको आन्तरिक अ of ्गहरूमा दबाब दिन कत्ति ठूलो छैन।
तेस्रो त्रैमासिकमा मासिक धर्मको साथ समान पीडा, तिनीहरू शारीरिक गतिविधिको कारण र भ्रुणमा अतिरिक्त भार बढाउने क्रममा।
कुनै पनि विकृति वा असुविधाको कुनै अभिव्यक्ति, गर्भावस्थाको समयमा, यो गम्भीर बिरामीको लक्षण हुन सक्दैन।
तपाइँको डाक्टरलाई सम्पर्क गर्न निश्चित हुनुहोस्, वा नजिकको महिला परामर्शमा। तपाईंले दुई, आफू र बच्चाको लागि जिम्मेवार भनेको के हो सम्झिनु पर्छ।
प्रारम्भिक समयसीमा पेट दुख्ने उपचार, गर्भावस्थाको समयमा पेट दुख्ने छुटकारा पाउन के गर्ने? / H2>
गर्भावस्थाको अवधिमा प्रकाश चरित्रको पेटमा दुखाइ सधैं रोगलोजी वा कुनै रोग को लक्षण हुँदैन। हल्का पेटको पीडा शारीरिक कारण हुन सक्छ। उदाहरण को लागी, टंचल मांसपेशी ऊतक टिश्यू र लिगुमेन्टहरू, थकान, र यस्तै। यस्तो अवस्थामा, एक महिला जसले बच्चा बोक्दै छ, एक महिलालाई आरामदायक, आराम गर्न सिफारिस गर्न सिफारिस गरिन्छ।
पहिलो त्रैमासिकको सुरूमा देखिने को मापमा तल्लो पीडाको मा तल्लो दुखाईमा, जो एक तान्न वा काट्ने चरित्र, एक वा दुईवटा ट्याब्लेटहरू लिनु पर्छ र पट्टिहरू यसलाई एक जना पापा बनेशिन नोटसेरी राख्न पनि अनुमति दिइन्छ। यी औषधीले गर्भपकको गर्भपातका लागि धम्कीबाट रोक्न मद्दत गर्दछ र गर्भाशयको स्वर कम गर्न मद्दत गर्दछ। बच्चा प्रवेश गर्ने आधारभूत नियम भनेको मुख्य नियम हो - "कुनै तनाव र शारीरिक श्रम बढाइएको छैन!"।
प्रत्येक गर्भवती महिलाले यो याद राख्नु पर्छ कि स्त्री रोग विशेषज्ञको साथ पेट परामर्शको साथ आवाश्यक छ! यदि, 12 हप्तासम्म एम्बुलेन्स गाडीको कारण हुनु आवश्यक छ भने, स्थितिमा एउटी महिलाले पेटमा चरित्र काट्ने कामलाई कस्तो किसिमको पीडा महसुस गर्दछन्।
यस्ता केसनमा 100% को सम्भावनाको साथ एक गर्भवती महिलालाई अस्पताल अस्पताल लगाउन आवश्यक छ। यो जान्नु महत्त्वपूर्ण छ कि केवल समयमै सहयोग र विज्ञहरूले योग्य सहायता प्रदान गर्न सक्छन् र बच्चालाई राख्न मद्दत गर्दछ।
यदि पेट एकदम गर्भावस्थामा तानिएको छ भने, जसले कारण गर्दछ?
गर्भावस्थाको विभिन्न चरणहरूमा, त्यहाँ पेटमा दु: खको उपस्थितिको विभिन्न कारणहरू हुन सक्छन्।
पीडाको स्रोत दुखाइ हुन सक्छ जुन गर्भावस्था (ग्यास्ट्रोइनस्टिन्डल ट्र्याक, परिशिष्ट, आदिको पासो हो) र यससँग सम्बन्धित छ।
1 सजिलो दुखाइ गर्भावस्थाको पहिलो त्रैमासिकमा दुखाइ सामान्य घटना हो। यसको व्याख्या - नयाँ जीवको गर्भमा जन्म र विकास। यस अवधिमा महिला जीवहरू पुनर्निर्माण गर्न थाल्छ। जे होस्, रोगविज्ञानहरूको घटना को सम्भावना मौकाको लायक छैन। यो पुन: सुरक्षित गर्न र डाक्टरलाई लागू गर्नु उत्तम हो।
2 बढेको ग्यास गठन र पेट निराशाले पेटमा अप्रिय संवेदना पनि निम्त्याउन सक्छ। सब भन्दा धेरैको लागि, यो सही खान सुरू गर्न पर्याप्त छ।
कुनै पनि मायालु महिलाको दृष्टिकोणबाट, जो केवल आमा बन्न तयार छैन, तर केवल एक इच्छाले जलाएर, गर्भावस्था सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घटना हो। र कहिलेकाँही यो दुवैले महिला परिवर्तन गर्दछ, र हार्मोनल्टी मात्र होइन, मनोवैज्ञानिक तहमा पनि। सामान्यतया, बच्चाको लगप हुन सामान्य रूपमा हुन्छ, तर केहि केसहरूमा गर्भावस्था काटिएको हुन सक्छ।
<< p> कुनै पनि भविष्यको आमाले यसको शरीरलाई सुन्नुहुन्छ र यसमा प्रवाह गर्ने केही परिवर्तनहरू देख्न सक्दछ। धेरै जसो गर्भावस्थाको अजीबहरूको कारणले हुन्छन् र महिला र बच्चाको लागि खतरामा पार्दैन। यद्यपि, केहि लक्षणहरू चिन्तित हुनुपर्छ, तीव्र पीडाको माथि उल्लेखित प्रहार सहित।
गर्भावस्था लगभग सबै महिलाको लागि हो - यो लगभग एक छुट्टी हो जसले जीवनको नयाँ चरणमा लगाउँदछ, केहि र नयाँ बनाउँदछ। यद्यपि, यी खुशी दिनहरूले दुखाइको रूपमा विभिन्न समस्याहरू ओभरट्स गर्न सक्दछ, जुन बच्चाको फरक समयमा हुन सक्छ।
<< p> कुन कारणहरूले गर्भावस्था कटौती वा बाँया कारण के कारणहरू निम्त्याउँछ? आफ्नो जीवन भर, फरक डिग्री मा कुनै पनि व्यक्ति पेटको गुहामा अप्रिय संवेदना हो। धेरै जसो यसको लागि, कोही पनि यसको बारेमा अनुभव गरिरहेका छैनन्, तर सबै चीज नाटकीय रूपमा परिवर्तन हुन्छ जब यो गर्भवती महिलाको कुरा आउँछ।
भविष्यमा आमा तुरुन्तै ध्यानको एक प्रान्त हुन्छ, किनकि, बच्चाको उपकरणको विशेषताका कारण यसलाई स्थायी हेरचाह चाहिन्छ। यस सम्बन्धमा, कुनै पनि, कम्तिमा हल्का स्वासपोजिसन एक अलार्म संकेतको रूपमा बुझिन्छ। गर्भवती महिलाको शरीरमा के हुँदैछ विचार गर्नुहोस्, र बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस् जब तपाईं आत्तिनुहुन्न, र जब यो अलार्मलाई हराउन थाल्छ।
दुखाइ गर्भधारण पछि पहिलो हप्ताको अवधिमा देखा पर्न सक्छ। यो गर्भाशयको भित्तामा हुनु आवश्यक छ कि छैन को एक निश्चित संकेत हुन सक्छ। प्राय: केहि महिलाहरूले यस लक्षणलाई मात्र याद गर्दैनन् र यसलाई मासिक धर्मको हारेहेरलाई ध्यान दिन्छन्।
कुनै अप्रिय भावना गर्भावस्थाको year 99 हप्तामा मात्र होइन, पेटको फेदमा दुखाइमा परेको छ र धेरै पहिले नै देखा पर्न सक्छ। यदि प्रक्रिया सामान्यतया अगाडि बढ्छ भने, यो कडा असुविधा हुनु हुँदैन।
तर कहिले पनि दुखाइ बिना पनि काम गर्दैन। अण्डा निषेरणशाली भएपछि, यो एघार अंगको गुफामा तल झर्छ।
यहाँ समाप्त हुने को लुक संरचनामा इम्बेड गर्न थाल्छ, जुन सामान्यतया केवल एक सिलाई वा प्रकृति काट्ने दर्दनाक संवेदना साथ हुन्छ।
पहिलो गर्भावस्था हप्ता
सामान्यतया प्रारम्भिक गर्भावस्थामा, कुनै पीडाविहीन हुँदैन, किनकि यो मुख्यतया महिलाको शरीर को कार्डिनल हार्मोनल पुनर्संरचनाको कारणले हो। यस आयका लागि गर्भावस्थाको समय अक्सर घटना हो, तर यसलाई सामान्य मानिन्छ।
धेरै तरीकाले हार्मोनको खेल धेरै परिमाणमा प्रोजेक्टरहरूको विकासका कारण हो। यो आवश्यक छ कि भ्रुण गठन साथै यसको उत्कृष्ट र विकास सामान्यमा अगाडि बढ्यो। जे होस्, ठूलो मात्रामा, यो हर्मोन एक चिल्लो मांसपेशीहरू र मल ढिलाइको सम्झौताको कार्यमा मन्दीको नेतृत्व गर्दछ।
कडा पेट काट्ने: कारणहरू र उपचार विधिहरू
। प्राय: "तीव्र पेट" को रूपमा नियमित रूपमा नियमित रूपमा अवलोकन गरिएको कारक, यो अन्तर्गत लुकाउँछ, तर पाचन र Urogenital प्रणालीहरु को धेरै गम्भीर पथवादहरु, मात्र चिकित्सा पेशेवरहरु मा पत्ता लगाउन।
संकेतहरूमा दुखाइको दृढ संकल्प
यदि पेटमा गम्भीर थम्बाहरूको चरित्र र आवृत्तिको खतरनाक छ भने, त्यसपछि चिकित्सकलाई भेट्नु अघि तपाईंले आफ्नो पीडा खोज्नु अघि तपाईंले आफ्नो पीडा खोज्नु अघि तपाईले आफ्नो दुखाइ खोज्नु पर्छ। एक आमनेस चित्रण गर्दा तिनीहरूलाई राम्रोसँग वर्णन गर्न।
पीडा प्रणालीगतकरण तीन दिशामा गरिन्छ: तिनीहरूको स्थानीयकरणद्वारा, उपस्थिति र आक्रमणको तीव्रताबाट।
एपिगास्ट्रिक्समा गर्भधारण पीडाहरू प्राय: खानाको तुलनामा सापेक्ष समयावधिमा बाँधिन्छ। यो प्रवृत्ति पनि गणना गर्नुपर्दछ र लक्षणहरूको वर्णनमा:
निदानलाई दुखाइको तीव्रता राम्रोसँग वर्णन गर्न एकदम महत्त्वपूर्ण छ। त्यस्ता स्पष्ट अभिव्यक्तिहरूमा वर्णन गर्न सकिन्छ:
प्रस्तुत प्रकारका दर्दनाक लक्षणहरू अस्थिर छन् र नकारात्मक सम्बन्धमा बृद्धि भएको एक अर्कालाई पनि परिवर्तन गर्न सक्दछ।
कारण - ग्यास्ट्रिट्स
तथ्याa्कका अनुसार, प्राय: पेटको कारणले लुकाइएको फाराममा बगिरहेको छ वा सक्रिय रूपमा आफैंमा प्रकट हुन्छ। रोगको मुख्य इच्छुक कारकहरू अनियमित र दोषपूर्ण पोषण हो, फ्याट र हल्का कार्बोहाइड्रेट, मदिरा दुरुपयोग, तनाव, तनाव, तनाव, तनाव, तनाव, तनाव, तनाव, संतृप्त छ। हालसालैका वर्षहरूमा, महिलाहरू बीच महिलाहरू बीचको रोगका घटनाहरू वजन घटाउनका लागि फैशनेबल डायट्सहरूको प्रणालीको घटनाहरू।
जब तीव्र वर्षाको लक्षणलाई बेवास्ता गर्दा रोगले चाँडै पुरानोको रूप लिन्छ। पेट कटौतीको उपचारको उपचार एक कडा आहार हो, फ्याट, मसलादार, मसलादार भाँडा, कुनै पनि सॉसेज र क्यान्डेड खाना हटाइन्छ।
गर्भावस्था हप्ता बेनिटेनस्ट-रु
को गर्भावस्थामा पेटमा:
कल्याणमा कुनै परिवर्तनहरू गर्न ध्यान दिनुहोस्। आखिर, एउटा सानो सानो मानिसको स्वास्थ्य यसमा निर्भर गर्दछ, जुन चाँडै तपाईंको परिवारको पूर्ण-टाढा सदस्य हुनेछ। बच्चा बढ्दै जान्छ, वजन प्राप्त गर्दै, बच्चा जन्माउने नजिक आउँदैछ। गर्भावस्थाको years 38 हप्ता को अवधिमा, महिलाहरूले रोग महसुस गर्न सक्छन्, http: मशानी। U / Bolit-zhivot-puchemu-Boolit-vnizahhota-U-zhenshhon-u-zhenshhon-u-Gazhhchin / यस बारे मा विभिन्न चरित्र र छलफल हुनेछ।
यस समयमा धेरै भविष्यका आमाहरूमा पेटको तल वा अन्य शब्दहरूमा पीडाको भावना http: मशाल छ। Su / bolit-zhivot-niz-zhivanta-Shaksa-freeiine-laichine-laittyy /। एक महिलामा, त्यस्ता लक्षणहरू खदीन गरिरहेका छन्।
तपाईंलाई थाहा हुनुपर्दछ कि यस तरीकाले शरीरले बच्चा जन्माउनुको तयारी गर्दैछ। एक नियमको रूपमा, यस समय द्वारा http: mantortal। सूर्य / ESLI-U-Readenka-बोल्ट-zhivotik / पहिले नै डुबेको छ, र बच्चाको स्थान परिवर्तन भएको छ, अब उनको टाउको सानो पेल्विसको तल अवस्थित छ।
भावनाहरूले http hets: mantortal। Su / Adenomioz-maki-priznai- ficeine-lithenie /। टोनमा आउँदा, र पुन: आरामदायी। गर्भाशयको अधिकतम टोनको समयमा, पेट एकदम ठोस हुन्छ, जस्तो कि यो घाँस काट्नु हुन्छ, त्यसपछि http: मशाल छ।
su / adenomioz-mahynizi-fiznny-lithenie / आराम, टोन कम छ, र पेट फेरि नरम हुन्छ। HTTP HTTP: mandortal। SU / Kak-Raspozzn-sxvatki / नियमित र छोटो अवधि (1-20-20 सेकेन्ड।
केही महिलाहरू गर्भाशयको उत्साहका कारण पर्याप्त कडा परिष्कृत छन्, अरुले पर्याप्त कडा परिष्कृत गर्छन्, तर कुनै पनि केस मा, यदिसुकै गर्भावस्था HTTP: मशाल छ। U / Bolit-zhivot-puchemu-bolit-vnizeu-Zhhenhain-u-zhenshhin-u-ga-zahhhhin- u-zhhenshain /। यसको मतलव तपाईको शरीरलाई बच्चा जन्माउन पूर्ण रूपमा तयार छ। जब दुखाइ कडा हुन्छ र धेरै चिन्तित हुन सक्छ तर shu। गर्भावस्थाको यस अवधिमा यसले फललाई असर गर्दैन, तर एउटी आमालाई अप्रिय प्रभावहरूको सामना गर्न मद्दत गर्दछ।
<< p> गर्न पहिलो कुरा शान्त छ र आराम गर्न कोसिस गर्नुहोस्। असहजतालाई कम गर्न, डाक्टरले एनिटेन्टेटल पट्टी लगाउन सल्लाह दिन सक्छ।
भविष्यका साथीहरू, तपाईं यस्ता उजूरीहरू सुन्न सक्नुहुन्छ: "पेट तानिन्छ, मासिक धर्मको रूपमा दुख्छन् ..."। त्यस्ता पीडाहरू 38 38 हप्ताको लागि गर्भावस्थासँगै साथ राख्न सक्छन्। पहिलो HTTP: mandortal।
त्यस्ता दुखाइहरू Cervix को उद्घाटन संग र यो केहि घण्टा, दिन वा अधिक देखि रहन सक्छ। यस प्रक्रियाको केहि लामो समय सम्म रहन्छ, अरूले अधिक समय लिन्छन्।
- HTTP: mantortall तान्न। U / Bolit-zhivot-niz-zhivanta-Shaka-fizichine-litienie-litneie। म्याद दिनांग दु: ख। भावनाहरू मासिक धर्मको रूपमा जस्तै समान छन्, तर घाँटीले पीडालाई प्रकट गर्दछ।
Cervix को उद्घाटन को मुख्य संकेतहरू नियमित रूपमा दोहोर्याइएको संकुचनहरू छन्। अधिक http: medortual प्रकट छ। U / ISKUSSTVANAYAM-MATKRAET-OTKRYVEVEVEVEV-O-v-moterinstve /। अधिक तीव्र र लामो झगडा।
<< p> त्यसोभए, प्राय: भविष्यका आमाहरू पेटको फेदमा एक प्रशंसाको बारेमा गुनासो गरिरहेका छन्। एक नियमको रूपमा, तिनीहरूले तिनीहरूलाई केहि पनि संगत गर्दैनन्, जुन हो,
हुन्छ भने पूर्ण अस्तित्वको पृष्ठभूमिमा देखिन्छ। त्यस्ता अवस्थाहरूमा, डाक्टरहरूको दर्दनाक संवेदनाहरूको उपस्थितिले उरूजातत गर्भावस्था प्रणालीको सामान्य प्रतिक्रियाको रूपमा प्रस्तुत गर्दछ।
<< p> यस प्रकारको लक्षण त्यस्तो उल्लंघनको विशेषता हो, जस्तै, पेटको दुखाइ बाहेक, महिला योनीबाट खूनी डिस्चार्जको उपस्थिति नोट गर्नुहोस्।
पहिलो, भोल्युम सानो छ, तर समय संग यो बढ्न सक्छ। नतिजा स्वरूप, गर्भवती महिलाको समग्र स्थितिमा त्यहाँ गिरावट आएको छ: रक्तचाप, चक्कर, मतली, बान्ता।
गर्भावस्थाको बखत पेटको तलको बारम्बार कारणहरू मध्ये मूर्तिकनको फेदको उपस्थितिमा मूसमितिलाई हाइलाइट गर्न आवश्यक छ - त्यस्ता रोगशास्त्रको उपचार गर्न धेरै गाह्रो छ, र असामान्य रूपमा अपील, महिला पुरानो रूप मा जान्छ।
एकै समयमा, प्राय: पूर्वानुमानको सुरुमा यो गर्भावस्थाको सुरुमा रोग मात्र हुन्छ। त्यस्ता अवस्थाहरूमा पेट, दर्दनाक, लगातार पेशाबको साथ छ।